Ny fisaintsainana dia
Ny fisaintsainana dia mety ho lalana tsotra mankany amin'ny fahatsapana fahatoniana, fifandanjana ary fiadanana, ankoatra ny tombontsoa hafa.
Na dia miovaova aza ny fomba fisaintsainana, dia tsy misy fomba mety na tsy mety amin'ny fisaintsainana. Ny hevitra ankapobeny dia ny mampihatra fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fitadiavana fahatsiarovan-tena - zavatra izay ahafahantsika rehetra mandray soa.
Raha vonona ny hanomboka ianao dia mety ho mpitari-dalana azo ampiasaina ny fampiharana fisaintsainana. Saingy miaraka amin'ny safidy maro, ahoana no ahafantaranao hoe iza no fampiharana tsara indrindra ho anao?
Mba hanampiana anao hanapa-kevitra dia nampitaha fampiharana fisaintsainana malaza roa izahay, Headspace sy Calm, mba hahitana ny fomba nanangona azy ireo.
Raha vaovao amin'ny fisaintsainana ianao dia toerana fanombohana tsara ny fampianarana Fototra 10 andro. Izy io dia natao hampianarana ny tena ilaina amin'ny fisaintsainana ao anatin'ny minitra vitsy isan'andro.
Rehefa manorina ny fanaonao ianao dia afaka mifindra amin'ny fisaintsainana hafa. Rehefa miditra amin'ny maha mpampiasa Headspace Pro ianao dia hahita fisaintsainana soso-kevitra vitsivitsy eo amin'ny efijery, mifototra amin'ny fotoanan'ny andro. Azonao atao koa ny mitahiry fisaintsainana amin'ny lisitry ny tianao indrindra.